Vis ည့်သည်အသစ်များအားပြန်လာသူများအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်မဟာဗျူဟာ ၄ Martech Zone
Vis ည့်သည်အသစ်များကိုပြန်လာသူများသို့ပြောင်းလဲရန်မဟာဗျူဟာ ၄
သောကြာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 18, 2015 တနင်္လာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 4, 2021 Douglas Karr
ကျနော်တို့အကြောင်းအရာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ပြproblemနာရရှိပါသည်။ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်ကျွန်ုပ်ဖတ်သောအရင်းအမြစ်အားလုံးနီးပါးသည်ဆက်စပ်နေသည် လေးလည်း ရောက်ရှိအသစ်သော visitors ည့်သည်များ အသစ် ပစ်မှတ်ထားပရိသတ်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု emery မီဒီယာလိုင်းများ။ သူများသည်အားလုံးဝယ်ယူမဟာဗျူဟာဖြစ်ကြသည်။
ဖောက်သည်များ ၀ ယ်ယူခြင်းသည်မည်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်း (သို့) ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုမဆို ၀ င်ငွေတိုးခြင်းအတွက်အနှေးဆုံး၊ အခက်ခဲဆုံးနှင့်အကုန်အကျများသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဤအချက်ကိုအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာအပေါ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသလဲ
ခန့်မှန်းချက်အသစ်များအရလက်ရှိဖောက်သည်များအားရောင်းချခြင်းသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၅၀% ပိုမိုလွယ်ကူသည် စျေးကွက်မက်ထရစ်
ဖောက်သည် retention ကိုတစ် ဦး က 5% တိုးအရသိရသည်အမြတ်အစွန်း 75% တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ် Bain နှင့်ကုမ္ပဏီ.
သင်၏ကုမ္ပဏီ၏အနာဂတ်ဝင်ငွေ၏ ၈၀% သည်သင်၏လက်ရှိသုံးစွဲသူများ၏ ၂၀% မှသာရရှိမည်ဖြစ်သည် Gartner မှ.
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်သုံးစွဲသူများသိမ်းဆည်းခြင်းနည်းဗျူဟာများတွင်အချိန်နှင့်ခွန်အားကိုမြှုပ်နှံနေပြီးအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများသည်ဖောက်သည်အသစ်များကိုမောင်းနှင်သည်ကိုသင်အသိအမှတ်ပြုပါကသင်၏ဖောက်သည်ခရီးတွင်သင်၏ visitors ည့်သည်သစ်များထံပြန်လာသည့် visitors ည့်သည်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုကူညီခြင်းသည်ကုန်ကျစရိတ်နှစ်မျိုးလုံးအကျိုးရှိသည်ဟူသောအဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။ နှင့်သိသိသာသာဝင်ငွေတိုးမြှင့်ကြမည်နည်း ဒါဟာသာမန်အသိပါပဲ။
Martech Zone visitors ည့်သည်အသစ်များကို ၀ ယ်ရန်ငွေကြေးမသုံးစွဲဘဲဂဏန်းနှစ်လုံးတိုးတက်မှုဖြင့်တစ်နှစ်တာဆက်လက်တည်ရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတိုးတက်မှု၏အများစုကိုအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံနှင့်ပါဝင်မှုအရည်အသွေးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ဖြန့်ကျက်ထားသည့်နည်းဗျူဟာအချို့သည် ပို၍ အခြေခံကျပြီးအကောင်အထည်ဖော်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
အီးမေးလ်ပို့ရန် Subscriptions - ပထမဆုံးအကြိမ် visitors ည့်သည်များနှင့်သင်၏သတင်းလွှာကိုမြှင့်တင်ပါ popups သို့မဟုတ်ထွက်ပေါက်ရည်ရွယ်ချက် ကိရိယာများ။ သင်၏သတင်းလွှာ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းနှင့် visitors ည့်သည်များအားမက်လုံးအချို့ပေးခြင်းသည်အီးမေးလ်အတော်များများကိုမောင်းနှင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဖောက်သည်များရေရှည်ဖြစ်လာနိုင်သည်။
Browser သတိပေးချက်များ - Browser အများစုသည် Mac နှင့် PC နှစ်ခုစလုံး၏ desktop systems များတွင် desktop notifications များကိုပေါင်းစည်းထားသည်။ ကျနော်တို့တပ်ဖြန့်ပါတယ် OneSignal ၏တွန်းအားပေးသောအကြောင်းကြားစာသည်။ မိုဘိုင်း (သို့) desktop မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ site ကိုရောက်တဲ့အခါ desktop notifications တွေကိုခွင့်ပြုချင်မလိုမေးသည်။ သင်ခွင့်ပြုပါကကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဝေသည့်အခါတိုင်းသင့်အားအကြောင်းကြားစာတစ်ခုပို့သည်။ နေ့စဉ်ရက်ပေါင်းရာနဲ့ချီတဲ့လူပေါင်းရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်စာရင်းသွင်းတယ်။
Feed Subscriptions - တိုးတက်အောင်နှင့်ပေါင်းစပ် Feed subscription ဝန်ဆောင်မှု ဆက်လက်ပေးဆပ်ရန်ဆက်လက်ရှိနေသည် လူအများအပြားက feeds များသည်သေပြီဟုယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အပတ်တိုင်းအစာကျွေးမွေးသူအသစ်များစွာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ site သို့စာဖတ်သူထောင်ပေါင်းများစွာပြန်လာနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နေရသည်။
လူမှုရေးအောက်ပါ - အစာစားခြင်းလူကြိုက်များမှုလျော့နည်းလာချိန်တွင်လူမှုရေးကဏ္ cr ကိုတိုးပွားစေသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသွားအလာနောက်ကွယ်တွင်၊ လူမှုမီဒီယာအသွားအလာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကရည်ညွှန်းမိတ်ဖက်ဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ၏နောက်လိုက်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကြားတွင်ထိုအသွားအလာကိုခွဲခြားရန်မဖြစ်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့နောက်လိုက်လာသည်နှင့်အမျှလွှဲပြောင်းအသွားအလာနှိုင်းယှဉ်မှုတိုးတက်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။
စာဖတ်သူများအားထိန်းသိမ်းခြင်းသည်လူများအားပြန်လာစေရုံမျှသာမဟုတ်ပါ။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်၊ သင်၏အကြောင်းအရာကိုဖတ်ရန်နှင့်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အချိန်ကြာကြာဆက်ဆံမှုပြုရန်စာဖတ်သူများသည်သင့်၌ရှိသည့်အခွင့်အာဏာအတွက်သင့်အားအသိအမှတ်ပြုပြီးသင့်အပေါ်သူတို့၏ယုံကြည်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ယုံကြည်မှုဆိုသည်မှာaည့်သည်ကို ၀ ယ်သူအား ၀ င်ရောက်စီးဆင်းစေသည့်အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။
Google Analytics အပြုအမူအစီရင်ခံစာများတွင်၊ သင်ကြည့်နိုင်သည် ပြန်လာအစီရင်ခံစာ vs နယူး။ အစီရင်ခံစာကိုသင်ကြည့်ရှုသည့်အခါရက်စွဲအကွာအဝေးကိုပြုပြင်ရန်နှင့်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာသည်စာဖတ်သူများကိုဆက်လက်ထားရှိခြင်းသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းရှိမရှိကြည့်ရှုရန်နှိုင်းယှဉ်ခလုတ်ကိုစစ်ဆေးပါ။ Google Analytics သည်စက်ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သောကွတ်ကီးများပေါ်တွင်မူတည်သောကြောင့်အမှန်တကယ်အသံပမာဏကိုလျှော့ချထားကြောင်းသတိရပါ။ သင်၏ visitors ည့်သည်များသည် cookie များကိုရှင်းလင်းခြင်းသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောစက်ပစ္စည်းများမှလာခြင်းများကြောင့်၎င်းတို့သည်အပြည့်အဝနှင့်အတိအကျမရေတွက်ပါ။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများစုကိုသိမ်းဆည်းခြင်းနည်းဗျူဟာများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ ဒါအလုပ်ဖြစ်ခဲ့လား လုံးဝ! ပြန်လည်ပတ်မှုများမှာ ၈၅.၃% တိုးလာသည်။ on Martech Zone။ သတိရပါ, ဒီထူးခြားတဲ့မဟုတ်ပါဘူး ဧည့်သည်များ - ဒါတွေကလည်ပတ်မှုတွေပဲ။ ဆိုက်ကိုပထမဆုံးလည်ပတ်ပြီးနောက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲပြန်လာတဲ့ visitors ည့်သည်အရေအတွက်ကိုနှစ်ဆထားပါတယ်။ ထို့ကြောင့် - ပြန်လာသည့် visitors ည့်သည်အရေအတွက်တိုးလာသည်၊ ပြန်လည်ပတ်သော visit ည့်သည်တစ် ဦး သို့လည်ပတ်မှုအရေအတွက်နှင့်လည်ပတ်မှုအကြားတွင်အချိန်ကုန်သွားသည်။ ၎င်းသည်သိသာထင်ရှားသည်။ ဝင်ငွေသည်လည်းပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် visit ည့်သည်သည်သင်ကူညီနိုင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ရည်ညွှန်းခြင်းသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်ငှားရမ်းခြင်းထက်များနိုင်သည်။ သင်၏ site သို့ visitors ည့်သည်များလာရောက်လည်ပတ်သူအရေအတွက်ကိုသင်ဂရုမစိုက်ပါကသင်သည်ဘတ်ဂျက်၊ စွမ်းအင်နှင့်အချိန်များစွာကိုဖြုန်းတီးနေသည်။
Tags: အပြုအမူအစီရင်ခံစာများbrowser သတိပေးချက်များအကြောင်းအရာစျေးကွက်နည်းဗျူဟာအီးမေးလ်ကfeed subscriptionsanalytics googlegoroostပြန်လာနှိုင်းယှဉ်အသစ်ပြန် vs အသစ်သတင်းလွှာပြန်လာ or ည့်သည်ပြန်လာ visitors ည့်သည်များလူမှုမီဒီယာလူမှုမီဒီယာအောက်ပါsubscribersမင်္ဂလာပါ
Omni-Channel ဆိုတာဘာလဲ လက်လီအရောင်းဆိုင်များသည်ဤအားလပ်ရက်ရာသီကိုမည်သို့ထိခိုက်သနည်း။
MomentFeed - ရှာဖွေခြင်းနှင့်လူမှုရေးအတွက်ဒေသတွင်းရှိမိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းများ
ဒီဇင်ဘာ 20, 2015 မှာ 3: 48 AM
ပြန်လာ visitors ည့်သည်များရရန်နည်းလမ်းရှာနေပေမယ့်ဒါဟာပုံရသည်နယ်ပယ်ပေါ်မူတည်သည်။ ဘရောင်ဇာသတိပေးချက်များကိုစမ်းသပ်ရန်သွား🙂
9:2016 pm မှာနိုဝင်ဘာ 10, 23
ဆောင်းပါးကောင်း တစ်ခါတစ်ရံမှာလူတွေက ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို ၀ င်တာကိုမေ့သွားကြတယ်လို့ထင်တယ်၊ Newsletter (သို့) Browser Notification စတဲ့သတိပေးစနစ်တွေရှိတာကောင်းတယ်။ တကယ်တော့ကောင်းသောအီးမေးလ်သတင်းလွှာအဟောင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည် (PressPad)
ဘလော့ဂါများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်သော PressPad News ကိုစတင်သောအခါအသုံးပြုသူထိန်းသိမ်းထားမှုတိုးလာခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကပန်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့အတွက်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများကိုတီထွင်သည်၊ အသုံးပြုသူများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသောစာမူအသစ်တိုင်းကိုအကြောင်းကြားပြီး၊ ၎င်းတို့အားနောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့်သူတို့ထိတွေ့မှုကိုသေချာစေရန် ဤသို့သောဖြေရှင်းနည်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်သနည်း။